Gedistaye: Qamaan Bulxan
Gabaygii 4aad ee Silsiladdii Rayad ahna gabaygii 2aad ee Qamaan Bulxan
Gabaygiisii 1aad Qamaan wuxuu dhawray maamuuska gabayga oo wuxuu iska ilaaliyey inuu Isaaq hadalka ku leexiyo. Hase yeeshee wuxuu ka xumaaday gabayga ka yimid ninkii Habar Yoonis, Maxamed Fiin. Sidoo kale Qamaan gabayga wuxuu ka dhawray calgaska oo labada nin ee uu u jawaabay mid walba wuxuu kala qaaday xarafka uu kasoo gabyey. Siduu Maxamed Fiinba ula yaabanaa garaadka Cali-dhuux ayuu Qamaana ka Ina Fiin ula yaabay.
Wuxuu tusayaa inuu jeclaan lahaa in isaga iyo Cali-dhuux la isu daayo si uu meel fog ugaga soo hadho. Wuxuu sheegay in gabayga Maxamed Fiin colaad hor leh ku beeray Ogaadeen hubkana ay haatan wada qaateen.
Cali-dhuux iyo Ina Fiinba waxay gabdho ka qabeen, inan-layaalna u ahaayeen niman Reer Ciideed. Joogitaankooda Ciid iyo Doollaba nimankaa ayuu ku xidhnaa oo ay ku tiirsanaayeen. Wuxuu Qamaan qaadan la’yahay in Ina Fiin marna inan-layaal yahay marna gaabso garan waayo. Reer Dalal oo nimankaa nagu dhex nool haddana na aflagaadaynaya aan bannaanka soo dhigin sideen guul ku gaadhnaa ayuu Qamaan ku dooday.
Gaar ahaan, wuxuu ugu baaqay Reer Dalal inay dilaan Maxamed Fiin maxaa yeelay xeerkii suubanaa ee dhawray ammaanka xididka iyo magantaba ayuu jabiyey. Wuxuu ku dooday in Maxamed Fiin af-lagaado geystay isagoo magan ah oo maganimadaa lagu xaqdhawrayo. Wuxuu ku dhaartay haddii aan xaal degdeg ah loo keenin inuu tirin doono tix afdhiige ah oo aan halna hanbayn. Wuxuu yidhi:
Nimanyahow rag geeri u batoo, lagu gablaynaayo
Anaa ganiyo anigaa gembiyey, goor kastaba joogta
Oo lagu gataatacahayoo, gibil madoobaaday
Oo loo gashaday baal sidii, gaalanimo roonta
Oo guriga wada meeriyoo, geela laga faani
Oo maanta geenyo iyo gabadh, goosan kara qaanti
Oo lagu garrami way la yaab, gole ka yeedhaaye
Gabaggabadii Daahyaale iyo, gabaygii loo jeedshay
Sow inuu geddiyo haatan Cali, lama gudboonaannin!
Hadalka waad gaftaye Maxamedow, kuuma soo geline
Saw magani tii gaabsateen, gabay lahayn ma aha?
Geeraarka iyo faanku sow, Guba la xeer ma aha?
Guntigii la furay waa fog sow, lama garwaaxeedsan
Gablamoow Ogaadeen haddaa, giirka loo dhigaye
Oon loo garaabeen wuxuu, geystay duud samiye
Ha gacmeeyo qaankiisu waa, waxaan gaboobayne
Alley lehe gu' baas bay jireen, waana loo galaye
Dirkii horeba gowsaha haddaan, gabadha soo qaadno
Oon gorofta caydheed ag dhigo, giraagirtaan meersan
Oon goroyo guridaa qabsado, godob ma yeesheene
Gashi nabsiyey oon geeri iyo, gacan la qaadaynin
Oo kii lahaa kugu gilgili, gaardin iyo qoolka
Gasabkeeda Eebboow bal yaa, galin usii jooga
Gartood weeye maansada inay, nagu garaacaane
Galti qeylyi oo had iyo jeer, ganafka uun taagi
Oo gowrac kaa mudan asaad, gacal walaalaysay
Oo gogosha kaa kicini waa, sida Gunbuurkeere
Cawl baa midgaan soo gasbaday, jeer gabraar tagaye
Jeenay gafsiisoo minday, qodatay garaaye
Labadeenna gobol xaajadeer, la isku guubaabshay
Haddaydaan guddiyin oo ciyow, gunno la noo keennin
Wallee inaan tix laysugu go'oon, gaagna hadhin sheegi
Gadistaye haddana meel kalaan, kaga gadaal laabmay
Hadalka waad gaftaye Maxamadoow, kuuma soo galine
Ma gu' yarida gee xaajadaa, guudka Habar Yoonis
Ama iga gar mari xaal gobbaa, iigu kaa go'aye
Markii farasku kula gaabiyaan, gegida kaa qaatay
Gaadhkoon hayiyo hiiladaa, aniga oo gaafan
Xaqa giigay feedhaha miyaad, yara gufaacootay
Gam inaad tidhaahdaan damcoon, Cali garaaxaaye
Naagtii ganbada taabatee, gacanta loo maydhay
Ee galisay meeshii haddana, gabaygu sow ma aha?
Cidluu gagafsan Reer Dalal ninkii, gacal tol moodaaye
Gurgure iyo Gadabuursi iyo, Gaanlahaa xigiye
Ganku iiguma yaal Ina-Barwaaq, gibilka saameede
Lafahooda guumays xun bay, ganac u siisteene
Ninkii gooya raayaha dhan bay, gabadh u raacshaane
Iga gudhan kuwaasoon gam odhan, gaasha libineede
Maad gowracdaan wiilka xunee, jooga gurigiina
 Daahyaale: Geel Ogaadeen laga qaaday ayaa Daahyaale loo bixiyey. Waa midka uu Maxamed Cumar Dage leeyahay; Daahyaale loo aar colkaad, nagu dangaysaane
 Cali: Cali-dhuux Aadan Goroyo
 Maxamed: Ina Fiin
 Galti: Eray asalkiisu Af-Ingiriis yahay laakiin Soomaaliyoobay loona isticmaalo qof soo galooti ah oo degaankii uu u dhashay mid aan ahayn ku dhaqan ama yimid (Guilty)
 Gumbuur, Habar Yoonis. Waa qoyska Maxamed Fiin